Abakhiqizi bendwangu abenziwe ngegolide i-polyester i-polyamide conductive / shielding 3L Imibhalo
Metallized wire conductive
Izindwangu zensimbi yensimbi
Amateyipu we-Kevlar / izintambo / ishubhu
Imaski elwa namagciwane namagilavu
Indwangu yesiliva eyenziwe nge-polyamide conductive / shielding
Isiliva eliboshwe nge-spandex lendwangu yokuqhuba / yokuvikela
Indwangu yePolyester Taffeta Paint Copper Conductive
Indwangu yethusi ne-nickel Conductive
Amagilavu ​​Esiliva Ne-Spandex (ama-antibacterial / kill virus)
Isiliva Mask (elwa namagciwane / libulala amagciwane)
Imicu ye-FeCrAl emelana nokushisa
Ithebula le-fiber elinezinsimbi ezingenazinsimbi eziphakeme
Ithebula lokusika i-FeCrAl fiber eliphakeme
Indwangu ye-fiber ye-FeCrAl emelana nokushisa
insimbi engagqwali intambo ephothiwe
intambo yensimbi engagqwali intambo / intambo
insimbi engagqwali fibre tube / sleeving / intambo
Insimbi engagqwali ithungelwe / imikhono
insimbi engagqwali i-fiber tubing / sleeving
insimbi engagqwali i-fiber tape / ibhande
Indwangu yensimbi engagqwali
Isisindo: 110g ± 5g
Ukwelashwa kuyatholakala: Ukwelashwa kwe-anti-oxidation
Min.Order Ubuningi: 120M
Izici Main: Ukumelana okuphansi kakhulu, ukuvikela amagagasi kagesi, ama-anti-radiation, ama-antibacterial, i-deodorant (udoti), ukuqeda ugesi we-static, ukuvuselela imisipha, ukulawula ukushisa komzimba, i-anti-UV, okuluhlaza okwemvelo, ukungena okuphezulu komoya
Indwangu yesiliva ehlanzekile eyenziwe nge-polyamide
Indwangu enhle yokuvikela enemisebenzi elwa namagciwane, isiliva elifakwe ezintweni eziyisisekelo ze-poly amide / inayiloni, ligqoka kakhulu, lithambile futhi likhululekile. Kungumkhiqizo wobuchwepheshe obuphakeme otholwe ngokuhlanganisa unomphela isiliva entweni yenayiloni ngenqubo ekhethekile esezingeni eliphakeme. Lesi sakhiwo asenzi nje kuphela ukuthi i-fiber yesiliva igcine impahla yendwangu yangempela, kepha futhi isinika wonke umsebenzi womlingo, umphumela wesiliva. Njengempahla yemvelo impela, isiliva liphilile ngokuphelele, linemvelo / liluhlaza futhi liyonga.
Isici esiyinhloko: Ukumelana okuphansi kakhulu, ukusebenza okuphezulu kokuvikela, ukuvikela amagagasi kagesi, i-anti-radiation, i-antibacterial, i-deodorant (udoti), ukuqeda ugesi we-static, ukuvuselela imisipha, ukulawula ukushisa komzimba, i-anti-UV, okuluhlaza okwemvelo, ukungena komoya okuphezulu, okungahle kusetshenziswe kabusha. Shining, usilika umuzwa othambile.
Izicelo Main: Impahla ephelele yokuvikela, anti-radiation, izingubo ezi-smart, izesekeli nezindwangu zasekhaya, izingubo ezilwa namagciwane, amaski, amagilavu ​​nezindwangu zasekhaya, imikhiqizo yezokwelapha, ezemidlalo, ukuzuza kwemisipha, imikhiqizo ehambisanayo, imikhiqizo ye-anti-static.
Ububanzi bemvamisa kanye ukuvikela ukusebenza:
Ibanga lemvamisa: 9KHz-40GHz
Ukuvikeleka ukusebenza: 60.0dB-71.0dB
Ukuhlala kabusha komhlaba: 0.2 Ohm / Cm
Isimiso sokuvikela i-anti-electromagnetic wave shield:
Isiliva lisebenza kahle futhi linomsebenzi wokuvikela i-electromagnetic. Lapho abantu begqoka i-anti-electromagnetic wave dress / izesekeli ukuxhumana nedivayisi ye-elekthronikhi, ingubo yama-anti-electromagnetic wave ingakwazi ukuqhuba ngokushesha nangempumelelo amagagasi kagesi, ngaleyo ndlela ivikele umzimba kumagagasi kagesi.
Antibacterial Izinhlobo: amagciwane atheleleke ngomgudu wokuphefumula - I-Covid-19, H1N1, Umkhuhlane, i-candida albicans, i-staphylococcus Aureus, i-eschenchia coliform njll.
Izimiso: Indwangu yesiliva ikhipha ama-ion esiliva azosusa amaprotheni e-enzyme ebusweni bama-bacteria nezinye izinto ezincane, ngaleyo ndlela abhubhise ukwakheka kwamagciwane, athinte ukusinda kwawo, futhi afezekise injongo yokulwa namagciwane.
Ama-ion esiliva angabulala amagciwane angama-99.99% atheleleke ngomgudu wokuphefumula, iCovid-19, H1N1, umkhuhlane ngemizuzu. Imiphumela yokuhlolwa evela ku-Institute of Microbiology and Epidemiology of the Academy of Military Medical Sciences ikhombisa ukuthi indwangu elwa namagciwane ingabulala noma icindezele umkhuhlane A kanye nomkhuhlane amagciwane ngesikhathi esifushane.
Minamprove ukujikeleza kwegazi: I-fiber ye-Silver ingakhuthaza ukufakwa kwe-microcirculation, umswakama nokujuluka, kungathuthukisa ngempumelelo ukujikeleza kwegazi. Amasokisi ezokwelapha aphefumula ngama-antibacterial, idolo, amabhande (Emithanjeni ye-Varicose, isifo sikashukela, isifo samathambo)
Ukukhuthaza Imisipha: ngoba i-electrode evuselela ezokwelapha, ukukhuthaza imisipha ngokomzimba.
Okuhlakaniphile /inzwa ehlakaniphile Ama-Produts:
Ngokuzwela okuphezulu kakhulu, indwangu yethu yesiliva isetshenziswa kakhulu kwimikhiqizo yenzwa ehlakaniphile, izingubo zangaphansi ezihlakaniphile, okokugqoka, izesekeli nezindwangu zasekhaya.
Langaphambilini Isiliva eliboshwe nge-spandex lendwangu yokuqhuba / yokuvikela
Olandelayo: RFID Conductive Mesh
Indwangu yesiliva ehlanganisiwe / evikelekile
Indwangu yesiliva ebhekene kabili
Indwangu ephikisayo ebhekene nomlilo
Isiliva Gloves (elwa namagciwane / ukubulala amagciwane)
Cha. 181 Taihua Street, Shijiazhuang, Hebei, China